ဂျိမ်းစ် ဟော့ဝု ဂျင်းန်. သိပ္ပံပညာရှင် ဆာဂျိမ်းဟော့ဝုဂျင်းန်
နက္ခတ် ၂၇ လုံး
နက်ဗျူလာများနှင့် ကြယ်အုပ်စုတို့၏ ယေဘုယျ အမျိုးအမည်စာရင်း
နေကြတ်ခြင်း နှင့် လကြတ်ခြင်း
ⓘ ဂျိမ်းစ် ဟော့ဝု ဂျင်းန်. သိပ္ပံပညာရှင် ဆာဂျိမ်းဟော့ဝုဂျင်းန်သည် ခရစ် ၁၈၇၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် လန်ဒန်မြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ ဂျင်းန်သည် အထူးသဖြင့် နက္ခတ္တ ..
ⓘ ဂျိမ်းစ် ဟော့ဝု ဂျင်းန်
သင်္ချာကို ထူးချွန်အောင် တတ်မြောက်ပြီးနောက် ဂျင်းန် သည် ထိုပညာကို နက္ခတ္တ-ရူပဗေဒတွင် အသုံးပြုလျက် စကြာဝဋ္ဌာ၏ နက်နဲမှုများကို ထုတ်ဖော် ရှင်းပြလေသည်။ ဆာဂျိမ်း ဂျင်းန်သည် နောက်လာနောင်သားတို့ သိပ္ပံပညာရပ်များကို လေ့လာရ လွယ်ကူအောင် စာအုပ်များစွာ ရေးသားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးစာအုပ်ပေါင်း ၁ဝဝ ရွေးချယ် ရာတွင် နက်နဲလှစွာ စကြာဝဠာစာအုပ်သည် အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ဂျင်းန်ရေးသားခဲ့သော အခြားစာအုပ်များမှာ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာလိုက်စားသူ ပညာရှင်တို့နှင့်သာ သင့်တော်မည့် စာအုပ်များ ဖြစ်၏။ ဆာဂျိမ်းဂျင်းန်သည် ၁၉၄၆ ခု စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့၌ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် အနိစ္စရောက်သည်။
Wikipedia: ဂျိမ်းစ် ဟော့ဝု ဂျင်းန်
နက်ဗျူလာများနှင့် ကြယ်အုပ်စုတို့၏ ယေဘ ..